Guryo la’aanta ka jirta dalka oo saameeyn weeyn ku leh qoysaska soomaalida ee soo galootiga ah | Gaaloos.com
Home » News » Guryo la’aanta ka jirta dalka oo saameeyn weeyn ku leh qoysaska soomaalida ee soo galootiga ah
“Sidaan u soo degay magaaladan labo jeer ayaa iskuulka ii soo diray balan carruurteyda ah labadeena jeerna waan ka soo gaari waayey sababo iskuulka aan dhigto ee SFI-ga u aado oo iga dheer. Waxaan dareemay in la igu dhibsaday taas, laakin ma dareensana daruufta kale ee guriga naga heeysta” ayey tiri hooyadan soomaaliyeed oo ku fekereysa ineey markale ku laabato cirifka waqooyi ee dalkaan oo markeedii horeba uga soo carartay qabowga daran.
Magaaladda Malmö, waxaa ay ka mid tahay magaalooyinka dalkaan ku yaaala ee la daala dhacaya qaxooti tirro badan oo sanadkii 2015-kii dalkaan ku soo jabay. Malmös ayaa saadaalineeysa in sanad walba ay iman doonaan magaaladda qaxooti lugu qiyaasayo 5000 ilaa 7000 tan iyo sanadka 2019-ka. Xafiiska guryaha laga dalbadana waxaa uu sheegay in 58 guri oo keliya ay ka banaan yihiin. Maamulka gobolkana waxaa ay soo galootiga ka codsadeen in degmooyinka iyo goboladda ku teetsan ay ka raadsadaan guryo tiiyo ay ku adag tahay laftooda.